जेसिका चेस्टाइन वार्तामा 'यो: अध्याय दुई' - स्टारमा कुरा गर्न
घर	हरर मनोरन्जन समाचार	'यो: अध्याय दुई' मा स्टार गर्न वार्ताको लागि जेसिका चेस्टाइन
'यो: अध्याय दुई' मा स्टार गर्न वार्ताको लागि जेसिका चेस्टाइन
by केली म्याकनी फेब्रुअरी 20, 2018
by केली म्याकनी फेब्रुअरी 20, 2018 1,131 हेराइहरू
रूपमा द्वारा रिपोर्ट विविधतादुई पटकको ऑस्करबाट उम्मेद्वार जेसिका चेस्टाइन एन्डी मुसचिट्टीको नेतृत्व लिन वार्तामा छन्। यो: दुई अध्याय हुर्किसकेका बेभरली मार्शको रूपमा।
यद्यपि यस ठाउँमा कुनै पनि हस्ताक्षर गरिएको छैन वा ढु stone्गामा राखिएको छैन, यो हराएको क्लबको वयस्क संस्करणहरूको लागि पहिलो कास्टिंग (अर्ध) घोषणा चिन्ह लगाउँदछ। विविधताका स्रोतहरूले भनेका छन कि "दुबै पक्षले आधिकारिक रूपमा [चेस्टेन] परियोजनामा ​​आउने बारेमा छलफल गर्न थालेका छन्"।
वयस्क पात्रहरूको लागि सम्भावित कास्ट जंगली सफलता पछि डराउने प्रशंसकहरू बीचको वार्तालापको चर्को विषय भएको छ Itप्रारम्भिक रिलीज।
हामी चाहन्छौं पहिले रिपोर्ट गरियो कि चेस्टेनको भूमिकालाई हेरिरहेका थिए र फ्यानहरूले यस विचारलाई समर्थन गर्दछन् - त्यहाँ प्रशंसक-निर्मित धेरै पोष्टरहरू छन् जुन अस्थायी रूपमा बेभको रूपमा उनको कास्ट गरिएको थियो। प्रतिभाशाली अभिनेत्री २०१ 2013 मा Muschietti संग पहिले काम गरेको तथ्यलाई विचार गर्दै आमा - गुइलर्मो डेल टोरो द्वारा उत्पादित - यो बुझिन्छ कि उनी एक शीर्ष प्रतिस्पर्धी बन्नेछिन।
मामा यूनिवर्सल चित्रहरु को माध्यम बाट
Muschietti प्रत्यक्ष फर्कन्छ यो: दुई अध्याय लेखक ग्यारी Dauberman संग। जब फिल्म संस्करण It पहिलो अवधारणाकृत थियो, पुस्तक डेभिड काजगनिच द्वारा लिपिमा अनुकूलित गरिएको थियो। क्यारी फुकुनागा (साँचो जासूस सीजन १, उर्फ ​​टिभीको सब भन्दा राम्रो एकल सीजन, मसँग लडाई) पछि चेस पाल्मरको साथ स्क्रिप्ट प्रत्यक्ष र पुनः लेख्नको लागि निर्धारित गरिएको थियो। फुकुनागा छोडेपछि र प्रोजेक्ट मुसचिट्टीले कब्जा गरे पछि, फिल्मले मुश्तीट्टीको दृष्टि फिट गर्नको लागि स्क्रिप्टलाई फेरि लेख्न मद्दतको लागि डोबरम्यानलाई ल्याइएको थियो।
यसको लागि स्क्रिप्ट यो: दुई अध्याय अहिलेसम्म चलचित्रमा काम सुरु भैरहेको छ यो ग्रिष्म ऋतुमा.
फेरी, हामीसँग कुनै आधिकारिक रूपमा हस्ताक्षर गरिएको कास्टिंग समाचार छैन (यद्यपि यो सुरक्षित छ कि हामीले बिल फिर्ती हेर्नेछौं Snyrsgård Pennywise को रूपमा)। त्यसोभए, यस समयमा, तपाइँ पक्कै पनि कुनै कास्ट पोस्टरहरू जुन तपाईंले देख्नु भएको तिनीहरू सम्भवतः प्रशंसकले बनाएको जस्तो शंकास्पद हुनुपर्दछ।
जहिले पनि, विवरणहरूको पुष्टि नभएसम्म, नुनको अन्नको साथ सबै चीज लिनुहोस्।
निश्चित प्रशंसक बनेको छ
भनिएको छ, जब समाचार आउँछ, हामी तपाइँलाई पोष्ट राख्न निश्चित छौं! यो: दुई अध्याय सेप्टेम्बर १,, २०१। मा रिलीजको लागि सेट गरिएको छ।